Archive du 20190826
Baolina kitra Malagasy Lany ho filohan’ny FMF i Arizaka Raoul
Lany ho filohan’ny Federasionina Malagasy amin’ny taranja baolina kitra na ny FMF Atoa Raoul Romain Arizaka Rabekoto, nanoloana an’Atoa Hery Rasoamaromaka tamin’ny fifidianana natao tany Mangily, kaominin’i Manombo any Toliara II ny sabotsy teo.
Depiote Todisoa Andriamampandry “Mialà rehefa tsy mahavaha ny olam-bahoaka
” Tsy mbola depiote dia efa niasa, ary mitohy izany, hoy ny depiote Todisoa Andriamampandry nandritra ny nofon-kena mitam-pihavanana nentina nisaorana sy nanaovana tatitra ny vahoaka ny sabotsy teo, ka 2000 mahery ireo solontena.
Sata mifehy ny mpanohitra Hihemotra ny fandinihana azy…
Mijanona ho adihevitra ary azo vinavinaina fa ho lavitra ny lalàna momba ny fanoherana eto Madagasikara.
Fanjakana Rajoelina Tsy tena mahatoky ny fahefana azo…
Ny fanenjehana ny mpanohitra sy ny kajikajy politika mifandraika amin’izany miseho ankehitriny, dia porofo lehibe mivaingana fa tsy mahatoky tena sy tsy mahatoky valera ny Filoha Andry Rajoelina sy ny ekipany.
Rasolonjatovo Honorè “Ilaina ny fanoherana saingy …”
“Tokony hapetraka amin`ny toerana maha izy azy ny fanoherana fa tsy mitsikera miompana amin`ny fanaratsiana”, hoy Rasolonjatovo Honorè, solombavambahoakan`i Madagasikara.
Kolikoly avo lenta Namoahana didy fampikarohana Rtoa Peta
Namoahan’ny Fitsarana misahana ny ady amin’ny kolikoly na ny « Pôle Anti-Corription »
Fanotoran-tany tsy am-piheverena Hanao fanambarana ny SECES
Nanao tatitra mikasika ny fitakiana samihafa nataony ny sendikan’ny mpampianatra mpikaroka na ny SECES Sampana Antananarivo notarihin’ny filohany Sammy Grégoire Ravelonirina ny 22 aogositra teo. efa misy lasa any amin’ny Primatiora ireo fangatahan’ny mpampianatra mpikaroka.
“Ligue des champions” aty Afrika Mitohy ny làlan’ny ny Fosa Juniors
Ny baolina tafiditr’i Santatra teo amin’ny minitra faha-67 izay nanasahala ny isa teny amin’ny solaitrabe ho 1 no ho 1 nandritry ny fihaonan-dry zareo Pamplemousse SC
Sesilany tamin’izany fotoana ny tsikera nahazo ny fitondrana teo aloha avy amin’ireo mpiaradia amin’ny fitondrana ankehitriny mikasika ireo tranga tsy ara-dalàna sy noheverina fa tsy mitondra soa ho an’ny vahoaka malagasy nafitsoky ny fitondrana HVM.
Fampandrosoana an’i Madagasikara Fitsinjaram-pahefana tena izy aloha
Maro ireo vahaolana azo eritreretina amin`ny fametrahana ny tena fitsinjaram-pahefana. Betsaka rahateo ireo soso-kevitra efa natolotry ny sokajin’olona na mpitondra samy hafa saingy rehefa misy atrikasa ihany no miseho izany.
Fandraharahana eto Madagasikara Maro ny sehatr’asa mila trandrahina
Ao anatin’ny fiandrasana ny fanatanterahana ireo fampanantenana marobe nataon’ny mpitondra isika amin’izao fotoana izao. Misy ny mandeha fa na ilay izy aza efa tamin’ny fotoana lasa.
Fanapahan-kevitra momba ny fampianarana “Tandrametaka ny ataon’ny minisitera ankehitriny”
Adihevitra lehibe tato ho ato ny resaka fanovana ny tetiandrom-pampianarana sy ny resaka PSE (Plan Sectoriel de l’Education), izay naverin’ny fitondram-panjakana ankehitriny amin’ny endriny teo aloha,
DISTRIKAN’AMBOHIDRATRIMO Mbola maro ireo olana sedrain’ny mponina
Mbola maro ny olana sedrain’ireo mponina ao anatin’ny distrikan’Ambohidratrimo, tsy maintsy hovahan’ny solombavambahoaka voafidy any an-toerana.
Taksibe sy fiarakaretsaka eto Iarivo Entanin’ny mpamojy voina hampiasa dabam-pako
Miomana sahady amin’ny fiatrehana ny fotoam-pahavaratra ny sampana mpamonjy voina etsy Tsaralalana.
Fandahavana hahazoana rano Ho vita amin’ny faran’ny volana ny eny Atsimondrano...
Miezaka manatanteraka ny teniny ny orinasa JIRAMA sy ny minisiteran’ny angovo, ny rano ary ny akoranafo amin’ny famatsiana rano ny mponin’Antananarivo.
TAKSIBE MIHODINA AN-DALANA Mila fiaraha-miasa amin’ny CUA ireo kaominina manodidina
Tsy misy izay tsy mitaraina amin’ny hafitsoky ny taksibe ny ankamaroan’ny mpandeha eto an-drenivohitra sy ny manodidina.
Mpivarotra amoron-dalana Tsy maintsy halamina sy harindra, hoy ny Delege
Na dia efa nametraka ireo tsipika mavo natokana ho an’ireo mpivarotra aza ny eo anivon’ny kaominina dia mbola misy ihany ireo mpivarotra no mihoa-pefy sy mivoaka ny faritra izay voafaritra natokana ho azy ireo.
FIARA TSY MIPETRAKA AMIN’NY “PARKING” 6 isan’andro no tratry ny Easy Park
Enina isan’andro ireo fiara tratran’ny Easy park tsy mipetraka amin’ny toerana tokony hijanonany eto an-drenivohitra, antony miteraka fitohanana etsy sy eroa sy ny tsy fahafahan’ny mpandeha an-tongotra mampiasa ny lalana sahaza azy.
Ady tany eny Ankorondrano andrefana Tonga amin’ny fandravana trano ny tompon’ny tany
Mbola mifandrirotra amin’ny resaka ady tany ny fokonolona sy ny olona milaza azy ho tompon’ny tany.
Fafy lainga momba ny fahatongavan’ny Papa Voasambotra i « Vorondolo »
Nahazo vahana teto amin’ny firenena, indrindra teo anivon’ny fiangonana katolika ny tahotra fanakorontanana ny ho fitsidihan’ny Papa François eto Madagasikara afaka herinandro mahery kely.
Fanararaotana sy halatra niainga tamin’ny “facebook” Tovolahy 23 taona voasambotry ny polisy
Tovolahy 17 taona nifanoratra tamina tovovavy 1 voalaza fa tsara tarehy tao anaty fesiboky.
Mpanendaka nidi-kizo teny Andraisoro Voasinton’ilay vehivavy voaendaka ny kara-panondrony
Tratran’ny vehivavy lasibatry ny sintomahery ny kara-panondrom-pirenen’ny mpangarom-paosy iray teny Andraisoro.